Ogaden News Agency (ONA) – CWXO oo curyaamiyay 5Gaas oo ka mid ah ciidanka cadawga – Tirakoob.
CWXO oo curyaamiyay 5Gaas oo ka mid ah ciidanka cadawga – Tirakoob.
Posted by ONA Admin	/ October 1, 2013
Ciidanka Waddaniga Xoraynta Ogadenya (CWXO) wuxuu curyaamiyay 5 gaas oo ciidanka qawlaystada ah ee gumeysatada Itoobiya tabartooda hawlgaleed. Waxaa ciidanka cadowga ee la curyaamiyay ka mid ahaa Gaas cusub oo markii ciidamadiisii hore hawl gabeen lagu soo xoojiyay. Dagaaladan oo socday tan iyo bishii dhamaatay ayay guul weyn ka soo hooyeen N/hurayaasha CWXO iyagoo fashiliyay qorshihii ay ku soo dhaqaaqeen guutooyinkaa.
Bisha Ogosti, wuxuu CWXO la galay ciidanka cadowga ee garaadka daran 84 dagaal. Inta la hubo waxaa laga dilay ciidanka cadowga 401 oo askar iyo saraakiil isugu jirta. Waxaa laga dhaawacay 378 qaarkood dhaawac culus yahay. Waxaa laga gubay 3 b/buur iyo ciidankii saaraa. Dagaaladaas waxaa lagaga furtay hub badan iyo qalab kale.
Tafaasiisha qaybuhu siday dagaalka u kala galeen tirakoob ahaan waa sidan:
1. Qaybta Qorqor waxay fulisay 18 dagaal. Waxaa cadawga laga dilay 99 saraakiil waaweyn ku jiraan. Waxaa laga dhaawacay 82 saraakiil badan ku jiraan.
2. Q/ Hanqadh waxay fulisay 17 dagaal waxaa cadawga laga dilay 57 waxaa laga dhaawacay 50.
3. Q/ Duufaan waxay fulisay 20 dagaal waxaa cadawga laga dilay 105 ay saraakiil badan ku jiro, waxaa laga dhaawacay cadowga 107. Waxaa laga gubay cadawga 2 b/buur oo kuwa ciidanka qaaday halkaas oo ciidankii saaraa ku dhinteen.
4. Q/Danab waxay cadowga ku fulisay 8 dagaalk, waxaa laga dilay askarta cadawga 40, waxaana laga dhaawacay 46.
5. Q/Heegan waxay fulisay 7 dagaal cadawga lagaga dilay 41 waxaana laga dhaawacay 27 inta la hubo.
6. Q/Halgan waxay fulisay 7 dagaal cadowga lagaga dilay 29 waxaana laga dhaawacay 31. Waxaa ciidanka gumeysatada laga gubay 1 B/buur kuwa ciidanka ah oo wixii saaraa dhamaan ku dhinteen.
7. Q/Birjeex waxay fulisay 7 dagaal waxaa cadawga laga dilay 30 waxaana laga dhaawacay 35.
Allaa Weyn Ninkii Aaminaa Awood Leh.
Good job sxbyaal sidaan ayaa sax ah inaad warka usoo koobtaan.kaliya waxaa ka dhiman inaad Qayb walba ka soo qaadataan Hal dagaal ee ugu muhimsan.
yaasir gulwade says:
mansha allaaaaaaaaaaaah aad iyo aad ayaan oogufaraxsanhaay ciidamada jwxo jidhxunta iyo wayaanhaba jabaiyay waxaanu leenahay guulaysta gacalayaal garabkiinaan joognaa mar walbaba
maasha allaah waa war lagu farxo guul guul jwxo